I-Hielscher Cascatrode - I-High Surface Sonication Probe - iHielscher Ultrasound Technology
I-Hielscher Cascatrodes ™ iyi-designer ekhethekile ye-sonotrodes (i-ultrasonic probes) ye-sonication ephumelelayo kumazinga aphezulu we-ultrasonic ngamandla aphansi noma ayenayo ye-sonication – ngokuvamile ngaphansi kwe-60W / cm² nangaphansi kwe-micron amplitude engu-60.
I-Hielscher ithuthukise i-Cascatrode ™ izicelo zokucubungula ezimbonini. I-Cascatrodes ™ iyatholakala kuwo wonke ama-processors ase-industrial ultrasonic – kusuka UIP500hdT (0.5kW), I-UIP1000hdT (1kW), I-UIP1500hdT (1.5kW) futhi I-UIP2000hdT (2kW) kuze kube kudivayisi ephezulu kunazo zonke ze-ultrasonic UIP16000 (16kW).
Uma uthuthukisa noma uhlola okusha sonication izinqubo, njenge: Emulsifying, Ukuhlakazeka, I-homogenizing, cell ukuphazanyiswa kanye nokususwa, i-deagglomeration, noma i-degassing uzothola lokho imingcele ye-sonication ethize sebenzela ngenqubo kangcono kunabanye. Ngaphandle kokushintsha amandla okukhipha ungashintsha ukuqina kwe-sonication: Kungakhathaliseki ukuthi ugxile ekukhipheni kwamandla endaweni encane ukuphakama okukhulu (high W / cm²) noma umbhangqwana amandla emaphakathi besebenzisa indawo enkulu endaweni amandla aphansi (i-W / cm² ephansi). Ukuqina kwanda nge sonication ephakeme amplitude, uketshezi oluphakeme ukucindezela noma ngaphezulu i-viscosity futhi yehle ngezinga eliphezulu lokushisa. Ngesinye isikhathi, usungule ukulungiswa okusemqoka kwepharamitha oyisebenzisayo, kuzodingeka gcina lokhu kulungiselelwa njalo ngesikhathi sikalwa. Uma ukhula, akufanele ushintshe ukuphakama nokucindezela kwe-sonication. Ngale ndlela, ugcina amandla we-sonication – yilokho I-ultrasonic amandla okukhipha isakhi ngasinye se-surface (Watts / cm²) njalo. Njengomphumela onengqondo, udinga indawo engaphezulu ye-sonotrode ukuze ubambisane namandla amaningi endaweni ebusweni obunikwe – lokhu kuhlanganiswa okulinganayo.
I-Hielscher inikeza izinhlobo eziningi ze-sonotrodes (= sonication probes) yamadivayisi wayo we-ultrasonic. Ngokuvamile, i-sonotrodes zihluka nge-tip ububanzi ukuhlinzeka ngezindawo ezehlukene ze-tip surface. Ukushona okuqondile kwe-sonotrode ngokuvamile akudingeki ukuhanjiswa kwamandla, njengoba ukuphakama kwawo kwe-oscillation kuqondiswe emkhathini wamanzi kuyinto ephansi kakhulu. Umklamo we-Cascatrode ™ uhlukile, njengalokho uneza izakhiwo ezizungezile ezizungezile kuya phezulu kwendonga. Indandatho ngayinye ihlelwe kwelinye lama-maximum oscillation we-sonotrode. Ngalezi zindandatho, ubuso obushukumisayo obuqhathanisa i-ultrasound phakathi nobudlelwane obuzokwazi ukukhuliswa ngegazi bungakhuphuka, kakhulu – ukuvumela amandla aphakeme e-ultrasonic ukuba ahlanganiswe abe yi-liquid endaweni enikeziwe ebusweni obunikwe. I-Cascatrode ™ yenza sikwazi ukudlulisa amandla aphezulu e-ultrasonic kuma-amplitudes aphezulu kuphakathi okucutshungulwayo.
I-Hielscher Cascatrodes ™ iyatholakala ngobude obuhlukahlukene kanye ne-diameter kanye nezinamba ezihlukahlukene zamasongo – eklanyelwe ukufanisa inqubo yokuqina kanye nesicelo esithile se-ultrasonic. Njengoba zisetshenziselwa amandla aphezulu kanye nezinqubo eziphezulu zevolumu, i-Cascatrodes ™ yilezi ikakhulukazi efakwe zibe izinhlelo zokugeleza eziqhubekayo. Ziyakwazi ukuzivumelanisa nezigelekezi ze-flow cells ezivumela ukucubungula kahle kwe-intanethi esikoleni.
I-Cascatrode e-flow reactor